Semalt Expert: 10 Zava-miafina azo antoka amin'ny Cyber ​​Security
Miadana kokoa ny sehatry ny fiarovana an-tserasera miaraka amin'ireo manam-pahaizana maromaro misahana ny indostria.Noho izany, ny rindrambaiko sy ny maro hafa dia mivoatra ary maherin'ny 230, 000 ny malware vaovao no natomboka isan'andro.Tombanana ho 100 arivo tapitrisa dolara no nampiasaina isan-taona mba hiadiana amin'ny cyber-heloka.
Raha mampiasa ny Internet ianao, dia sahiran-tsaina amin'ny fanafihana cyber. Manarakahevitra avy amin'i Nik Chaykovskiy, ny Semalt Senior Manager Success Manager, dia maneho fa mampidi-doza ny mandeha amin'ny browser mba tsy ho voaro - boat appraisal book.
1. Ny mpamono cyber indrindra indrindra
Ny FBI dia manana lisitr'ireo mpanao heloka bevava Internet 19 izay tompon'andraikitra indrindraNy faharesen'ny mpampiasa ao amin'ny $ 350,000 hatramin'ny $ 100 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao, ny olom-banona JABBERZEUS no tadiavin'ny FBI.
2. Ny virosy virtoaly tena sarobidy indrindra amin'ny tantara
Ny MyDoom dia heverina ho ny vola miditra indrindra manerantany amin'ny tantaran'ny cyberfiarovana. Voamarina fa ny viriosy dia nahatonga faharavana $ 38,5 lavitrisa.
3. Ny tanjon'ireo mpanafika ny media sosialy
Hatramin'izao, maherin'ny 1.6 lavitrisa mpampiasa media sosialy manerantany no manao izanyNy lasibatry ny hacker no tadiavina. Ireo mpampiasa izay mandany fotoana manan-danja amin'ny tambajotra sosialy dia mety ho tratran'ireo fanafihana ireo.
4. 99% -n'ny ordinatera dia mety hampidi-doza
Maherin'ny 99% amin'ny ordinatera manana programa toy ny Adobe Reader, Oracle Java, ary AdobeFlash napetraka eo amin'ny rafi-piasany. Ny fanatrehana ireny rindrambaiko ireny dia mamorona fantsona iray izay ahafahan'ireo mpanafika mitombo amin'ny fidiranany gadget..
5. Mpanao heloka bevava amin'ny aterineto no manintona indrindra ny fomba hampidirana ny tra-boina
Ireo olona niharan'ny herisetra dia mora manelingelina satria ny olona no manana ny rohy malemy indrindramomba ny fiarovana cyber. Noho izany, ny rafitra ara-tsosialy dia manondro ny fomba fiasa hanomezana toky fa ny tsirairay dia mamela tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-bolaizy ireo ara-psikolojika.
6. Fampitandremana momba ny fiarovana: ao anatin'ny asa
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, manodidina ny 59 isan-jaton'ny mpiasa no mangalatra ny angon-drakitra momba ny fikambananadia voaroaka na rehefa miala. Ny fiasan-tsasatra hafa natao ho voaro dia ahitana mpitsikilo malotona, mpikatroka tsy miangatra sy mpanararaotra.
7. Ny governemantanao dia mampitombo ny fahavoazanao
Ny zava-misy dia mamorona malware amin'ny fikasana ny governemanta eran-tanyamin'ny fampiasana izany ho fitaovam-pifandraisana niomerika. Ny malware dia mahita ny fomba fandaminana manokana sy ny ordinatera manokana izay miteraka evolisionany maloto amin'ny heloka bevava.
8. Misy sarintany eo akaiky izay mampiseho ireo mpanafika amin'ny asa
Etazonia no lasibatry ny mpamono cyber. Ohatra, nyNy US Department of Defense dia nijaly mihoatra ny 100 tapitrisa dolara noho ny fanafihana nataon'ny mpanao heloka bevava Shinoa iray.
9. Ny ady amin'ny cyber dia fanamby goavana ho an'izao tontolo izao
Ny 68% n'ny vola very vokatry ny fanafihan'ny Aterineto dia heverina ho tsy azo ovaina.Ny heloka bevava an-tserasera dia tsy hoe mavesa-danja fotsiny ihany fa miteraka fanamby hafa ho an'ny orinasa manerantany.
10. Ny Hacktivism no loharanom-baovao voalohany manakorontana ny fanafihana cyber
Ny hacktivism dia mihoatra ny 50 isan-jaton'ireo fanafihana cyber amin'ny ankapobeny. Ny teny diafanehoana ny fampihetseham-pon'ny mpanohitra amin'ny fikasana hanatsarana ny fandaharam-politika.
Tsarovy mandrakariva, fa tsy tokony hanamaivana ny heloka bevava aterineto ianao. Koa tsy misy fiarovanadia mahomby, tsy misy fandrahonana loatra loatra. Na inona na inona halehiben'ny fandrahonana fiarovana an-tserasera, dia tokony hatao ny fepetra ilainamba hisorohana ny fanafihana mety hitanao.